Home » Blog » Torolalana ho an'ny rindrina matevina
Ny mari-pamantarana marika ProForm dia novokarin'ny ICON Health and Fitness. ICON Health and Fitness dia orinasa iray miorina avy any Utah izay mifantoka amin'ny famokarana fitaovana fanofanana. Ny ICON Health & Fitness dia manana marika maromaro fanampiny maromaro ahitana NordicTrack, Healthrider, ary Freemotion. Ho hitanao fa ireo singa mpikirakira ny marika tsirairay dia mitovy tsy tapaka raha ampitahaina amin'ireo modely avy amin'ny marika tsirairay.
Ny anarana marika ProForm dia nihatsara tsikelikely nandritra ny taona maromaro. Nihatsara be izy ireo fa ny fitifirana ProForm dia ny hazakazaka marika amin'ny Marathon Boston. Tadidio anefa fa misy karazan-trondro marobe ao anatin'ity marika ity. Ny fahombiazany, ny faharetany ary ny vidiny dia samy hafa be.
ProForm dia manana rindranasa samihafa ho an'ny 2016. Ny Power Series dia manana rindran-damina mitentina $ 999 amin'ny $ 1999. Ny tantsaha Steeper dia tafiditra ao anatin'ny Series PRO sy ny Marathon Series Boston saingy hividy bebe kokoa ireo singa ireo. Ny randran-tsasatra Boston Marathon dia ny milina milevina indrindra amin'ny ProForm. Ireo dia natao ho an'ny atleta izay mihazakazaka mandritra ny ora maro.
Ny hazakazaka marathon amin'ny marathon no safidy mora indrindra amin'ny ProForm. Mahery sy maharitra izy ireo mba hanohanana ny milina 4 minitra. Anisan'izy ireo ny programa fampiofanana marathon ho an'ny mpanaraka, ankoatra ireo atleta ambony. Ny tompon'ireo Tranom-pahasalamana Boston Marathon dia afaka miaina fanitsakitsaka mihodina, fihenanam-pahefana sy fihenanam-po, ary fametrahana fiaramanidina avo lenta izay nalaina tao amin'ny hazakazaka Boston. Ny fampiendrehana dia aseho amin'ny 10 "touchscreen".
Ny karazana 2 dia ny randrana marathon Boston Marathon 3.0 sy ny hazakazaka marathon Boston Marathon 4.0. Ny 4.0 dia manana teknolojia SpeedRing. SpeedRing dia fifehezana haingam-pandeha tsy misy fepetra izay mikopakopaka amin'ny serivisy Bluetooth.
ProForm dia manao tatitra manokana momba ny latabatra. Ny modely am-pitiliana ny birao dia ny ProForm Thinline ary ny ProForm Thinline Pro. Ireo singa miovaova ireo dia azo ampiasaina amin'ny tablette na solosaina findainao.
Tsy toy ny trotmills amin'ny ankabeazan'ny birao, ny fitiliana ny biraon'ny tontolon'ny ProForm dia manana lalam-pandehanana be dia be ary feno fonosana ao anatin'izany ny fihenanam-po / ny fihenan'ny 30 amin'ny 40 fampiharana fampiharana, ary ny teknolojia iFit.
Treadmills fanatanjahan-tena matihanina
Ny Serasera ProForm Sport dia manome fahafaham-po ny olona mitady fitaovana fampiasana sarobidy kokoa. Ny ankamaroan'ny tetezana dia 60 "lava ary ny fitifirana tsirairay dia SpaceSavers. Azo atao ny mikarokarena ny tontonana SpaceSaver mba hampitombo ny habaka. Ny fitifirana fitahirizam-bolo Proform Sport dia manana tebiteby ho an'ny 12% ary ny iFit dia afaka. Ny mpikambana iFit kosa dia mivarotra an-tsokosoko. Ny motera amin'ity hazavana ity dia avy amin'ny 2.75 mankany 3.5 HP.
Ny andian-tsarimihetsika Proform Performance dia ahitana tarika maro. Ireo motera ao amin'ireny vondrona ireny dia avy amin'ny 2.0 ka hatramin'ny 2.75 CHP. Ny singa ao amin'ny andiam-panatontosana dia mampiova io amin'ny 10-12%.
Ny dian-tongotr'ireo singa ireo dia somary fohy kokoa noho ny modely ambony indrindra amin'ny proform. Ny ankamaroan'ny fandrakofana ao amin'ny andiam-panentanana dia 55 "lava. Ireo fitifirana ireo dia azo avy amin'ny $ 400- $ 800. Amin'ny ankapobeny ny fiantohana ireo singa ireo dia taona iray ampahany ary taona iray niasana.
Profesora Power Profester
Ny tora-pasika Power ProSome Power Series dia dingana iray avy amin'ny Performance Series. Mitovy ny fomba fitahirizana, saingy maharitra ny fanomezan-toky. The Power 1495 mitarika ny Power Series. Manana fikolokoloana sy fihenanam-po izy, 10 "mijery sarimihetsika, programa fanatontosana 34 ary fanaraha-maso amin'ny fo mitera-pahavoazana. Ny ampahany amin'ny tora-bato vitsivitsy dia rakotra mandritra ny taona 5. Ny vidiny eo ambanin'ny $ 1500, ny Power 1495 dia anisan'ireo sari-pientan'ny ProForm tsara indrindra ho an'ny mpividy tranokala mahazatra. Ny kitapo tsirairay ao anatin'ny andian-kery dia manana motera 3.0 na 3.5 CHP, feno 20 "x 60", ary ny 15% automatique. Ny iray amin'ireo andian-kery isiFit-ready.
Profread Pro Treadmills
Ny ProForm Pro Series dia manasongadina ny teknolojian'ny fitarihana proforma ivelan'ny fandaharan'asan'i Marathon. Misy ny hazakazaka 4 amin'ity andiany ity. Ny motera avy amin'ny sehatra Proform Pro dia avy amin'ny 3.5 ka hatramin'ny 4.25 CHP. Ny tetikasa fitahirizana arahin'ny Pro dia miteraka fihenan'ny 15% ankoatra ny -3% decline. Ireo torolalana ireo dia iFit compatible ihany koa. Ny arofanina tena sarobidy indrindra ao amin'ny Series Pro dia ny "trekking" Pro 900. Ny rindranasa Pro 900 dia navaozina vao haingana ho an'ny 2016 ary manasongadina ny "touchscreen" 10.
Ny zavatra mahafinaritra momba ny Proform dia ny fanoloran-dry zareo fanitsakitsahana ny teti-bola. Ny saran-dàlana dia avy amin'ny $ 399 ka hatramin'ny $ 3999. Raha mpihazakazaka be ianao, dia afaka mifidy modely fototra na zavatra tsara kokoa. Ny ankamaroan'ny hazakazaka amin'ny rindrina dia azo alaina. Ny fitaovam-pitaovam-piofanana profer vaovao dia tsara fitondran-tena mba hanaisotra ny fahatairana. Ny sasany amin'ireo mody lafo kokoa aza dia mamela anao hanala ny fiampitàna mba hanamafisana ny fiofanana any ivelany. Ny tombontsoa amin'ny tolotra azo antoka dia miovaova ny tonony. Ny fitifirana marathon dia afaka mandrakotra ny ampahany hatramin'ny taona 6. Ny modely maodely sasany amin'ny teti-bola ihany anefa dia tonga miaraka amin'ny fiantohana miasa amin'ny andro 90 mba hahazoana antoka fa manao ny devoara ianao alohan'ny hanapahanao hividy fitifirana proforma.
Janoary 18, 2016 FitnessRebates Blog, Proform, Treadmills Tsy asian-teny
January 2016 Drugstore $ 15 Off $ 75 Order for New Customers Valid to 1 / 31 / 16